Myanmar Deitta | Being Gay in Papua New Guinea
Vlad Sokhin | Part of &PROUD Photo 2016
7th - 15th May 2016 | Tues - Sun | 10am - 5pm
Hanuabada village is one of few places that gay and transgender men can live in relative safety in Papua New Guinea,acountry where homosexuality is illegal. Around thirty gays permanently live in the village,acollection of traditional-style Papuan houses on stilts. Other PNG gays have moved there from other places around the country. Gele gele (”gay men” in Tok Pisin, the local language) take on traditionally female roles in society, such as cooking, washing clothes and participating on women’s side in cultural rituals and traditional festivals.
ဟာနောဘတာ ဟု ခေါ်တွင်သော ရွာကလေးသည် လိင်တူချစ်ခြင်းကို တရားဝင်တားမြစ်ထားသော ပါပူအာနယူးဂီနိ နုိုင်ငံရှိ လိင်တူချစ်သူများ အေးချမ်းစွာ နေထုိုင်နိုင်သော လက်တစ်ဆုတ်စာ နေရာများထဲမှ တစ်ခု အပါအဝင်ဖြစ်ပါသည်။ ထိုရွာငယ်လေးတွင် အမျိုးသားချင်း ချစ်ခင်စုံမက်သူ အယောက်၃၀နီးပါးမှာ ဒေသစတိုင် ခြေတံရှည်အိမ်ကလေးများဆောက်ပြီး ကာလကြာမြင့်စွာ နေထိုင်လျက်ရှိပါသည်။ ဒေသအခေါ် ဂီလိ ဂီလိဟု ခေါ်တွင်သော ယောက်ျားချင်းချစ်ခင် စုံမက်သူများသည် ယင်းရွာငယ်လေးတွင် ချက်ပြုတ်လျှော်ဖွတ်ခြင်း နှင့် ဘာသာရေးနှင့် ဓလေ့ပွဲတော်များတွင် ပါဝင်ခြင်း စသည်ဖြင့် အမျိုးသမီး အခန်းမှနေရာယူလေ့ရှိသည်။
In PNG gays are mostly accepted by costal inhabitants, but targeted in areas populated by highlanders. Violence against them, such as biting and rape, is common; in the past there wasanumber of reported murders. Members of the Hanuabada LGBT (Lesbian, Gay, Bisexual and Transgender) community say that ifagay person reportsarape to the police, he may be blamed instead of the perpetrator and arrested for practicing homosexuality, which is punishable by up to 14 years in prison. However, there have not been any official reports of long imprisonment directed at LGBT persons during the last few years.
ပါပူအာနယူးဂီနိ တွင် အမျိုးသားချင်း ချစ်ခင်စုံမက်သူများကို ကမ်းရိုးတမ်းဒေသခံမျာက လက်ခံကြသော်လည်း တောင်ပေါ်သားများအများစုံးနေထိုင်သော ဒေသများတွင် ခွဲခြားဆက်ဆံခြင်း ခံရသည်။ ကိုက်ဖြတ်ခြင်း နှင့် မုဒိမ်းကျင့်ခြင်း အစသော လိင်အကြမ်းဖက်မှုများကို တွေ့ကြုံခံစား နေကြရသည်။ ယခင်ကမူ လူသတ်မှုများအထိပါ ရှိခဲ့သည်ဟု ဆိုသည်။ လိင်တူချစ်သူတစ်ဦး အနေဖြင့် မဒိမ်းမှု ကြုံတွေ့ခံစားရပြီး ရဲတိုင်ပါက အမှုကို အရေးမယူသည့် အပြင် ထိုသူအား စေ့ဆော်သူ ဦးဆောင်သူ အမှုဖွဲ့ ဖမ်းဆီးလေ့ရှိသည်။ ထိုသို့ ဖမ်းဆီးခံရပါက လိင်မှုခေါင်းစဉ်တပ်ပြီး (၁၄)နှစ်အထိအကျဉ်းချခံရသည်။ သို့သော် ပြီးခဲ့သည် နှစ်အနည်းငယ်အထိ မှတ်တမ်းမှတ်ရာ များအရ လိင်တူချစ်သူများ အသိုင်းအဝိုင်းမှ ထောင်နှစ်ရှည်ကျထားသည် ကျနေသည်ဟူသော မှတ်သားထားသည်များ မရှိချေ။
Although there are few nightclubs in Port Moresby that allow gays and transgender people to have “gay nights”, for safety reasons, most of the Hanuabada gays prefer not to leave the village at night, organizing parties near their houses instead. Such village parties are popular among local men, who approach gays for sex. Some teenage boys come to gays in search of their first sexual experience, since they feel too shy to approach girls. PNG men don’t classify these encounters as homosexual in nature; for them, being gay is much more aboutaman playing the woman’s role in society.
Port Moresby တွင် အမျိုးသားချင်း ချစ်ခင်စုံမက်သူ များနှင့် ဆန့်ကျင်ဘက်လိင်ကဲ့သို့ ဝတ်ဆင်နေထို်င်သူများ ကို လက်ခံသော နိုက်ကလပ် အနည်းငယ်မျှရှိသော်လည်း ၄င်းတို့အဖို့ ကျရောက်နိုင်မည့်ဘေးကို စဉ်းစားပြီး ညတွင် ရွာ အပြင်ထွက်လေ့ သိပ်မရှိကြဘဲ အိမ်များတွင်သာ ပါတီများ တွေ့ဆုံပွဲများလုပ်လေ့ရှိ်ပါသည်။ ထိုရွာလေးမှာ လိင်တူချစ်သူများ နှင့်လိင်ဆက်ဆံလိုသူ အမျိုးသားများ အကြားတွင် နာမည်ကြီးလေ့ရှိသည်။ တစ်ချို့ သော လိင်အတွေ့အကြုံ မရှိသော မိန်းခလေးများနှင့် ပထမဆုံး ဆက်ဆံရန် မဝံ့မရဲဖြစ်နေသည့် ဆယ်ကျော်သက် အမျိုးသားငယ်လေးများမှာလည်း ၄င်းတို့၏ ပထမဆုံးအတွေ့ကြုံကို အမျိုးသားချင်းစုံမက်သူများနှင့် ယူလေ့ရှိသည်။ ပါပူအ¬ာနယူးဂီနိ မှ အမျိုးသားများ အဖို့ အဆိုပါ လိင်ဆက်ဆံခြင်းကို လိင်တူစုံမက်ခြင်းဟု မယူဆဘဲ ၄င်းတို့ အဖို့်မူ gay ဖြစ်ခြင်းမှာ လူပတ်ဝန်းကျင်တွင် အမျိုးသမီးတာဝန်ထမ်းဆောင်သော အမျိုးသားများအဖြစ်သာ ယူဆကြသည်။
Image © Vlad Sokhin